होलीमा स्टायलिस र ट्रेन्डी कसरी देखिने ? - Mero LifeStyle Mero LifeStyle
पोखराबाट जोमसोमका लागि उडेको तारा एयर लेतेमाथि दुर्घटना भएको आशंका
यसरी मनाइयो गणतन्त्र दिवस (फोटो फिचर)
पूर्वीयुक्रेनतर्फ निरन्तर बढ्दै रुसी सेना
गायिका साकिरामाथि कर छलीको आरोप
यो वेबसाइट जसले चिकित्सकलाई मात्र जुराइदिन्छ जोडी
अर्को पालीको दानमा नो भोट हुन सक्छ
‘म भित्रको प्रवल इच्छाशक्तिका कारण तिलोत्तमाको रुपान्तरण सम्भव छ’
कहाँ चुम्बन गर्दा के अर्थ लाग्छ ?
होलीमा स्टायलिस र ट्रेन्डी कसरी देखिने ?
सुमित्रा लुईंटेल || 28 March, 2021
होली रङको पर्व हो । यो दिन एकापसमा भाइचारा साट्ने, मिलेर होली खेलिन्छ । रङको यो पर्वमा आफ्नो परिवार तथा साथीभाईहरूसँग मिलेर होली खेल्न मिठाई, कपडा तथा अन्य कुराहरू किन्ने तयारी गर्नतिर लाग्छौ । यो दिन सबैलाई आफू अरुभन्दा अलि फरक र स्टाइलिस देखियोस् भन्ने चाहना हुन्छ । होलीमा अरुभन्दा अलग कसरी देखिने त ?
पटियाला कुर्ता सुरुवाल होलीमा महिलाहरूको लागि राम्रो छनोट हुन सक्छ । यो लुकले तपाईंलाई आरामदायी महसुस हुनेछ । यसको साथसाथै परम्परागत र आकर्षक देखाउने छ ।
होलीको रङबाट छालाको साथसाथै कपालको पनि सुरक्षामा ध्यान दिनुपर्छ । यस्तोमा कपाललाई कलरबाट बचाउन, कपाल बाँध्न र क्यापको प्रयोग गर्न सक्नु हुन्छ ।
आँखाको विशेष ख्याल राख्नुपर्छ
आजभोलि रङमा विभिन्न हानिकारक केमिकलको प्रयोग भएको हुन्छ, जुन आँखाको लागि हानिकारक हुन सक्छ । त्यसैले आँखालाई रङबाट जोगाउन तपाई कलरचेन्ज चश्माको प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ । यसले तपाईंलाई स्टाइलिस पनि देखाउनेछ । आँखामा लेन्सको प्रयोग गर्नु भएको छ भने आइड्रपको प्रयोग गर्नु राम्रो । चश्माको कलर सफा गर्न भने तातो पानीको प्रयोग गर्नु वेश हुन्छ ।
आकर्षक फुटवेयरको छनोट
होलीको लुगासँग मिल्ने जुत्ताको छनोट गर्नु बुद्धिमानी हुन्छ । किनकी होली खेल्दा तपाईंले अनिवार्य पानीको प्रयोग गर्नु भएको हुन्छ, जसले गर्दा चिप्लिएर लड्ने सम्भावना धेरै हुन्छ । त्यसैले पानीमा नचिप्लिने जुत्ता लगाउनुपर्छ ।
होलीमा ग्राफिक टिसर्ट पुरुषहरूको लागि सबैभन्दा राम्रो विकल्प हुन सक्छ ।
कपालको सुरक्षामा पनि दिनुहोस् ध्यान
होलीको रङबाट छालाको साथसाथै कपालको पनि सुरक्षामा ध्यान दिनुपर्छ । यस्तोमा कपाललाई कलरबाट बचाउन, कपाल बाँध्न र क्यापको प्रयोग गर्न सक्नु हुन्छ । कपाललाई सुरक्षित राख्न नरिवलको तेलको प्रयोग पनि गर्न सक्नु हुन्छ ।
पुरुषहरूको लागि गार्फिक टिसर्ट
पुरुषहरूको लागि होलीमा कटनको टिसर्ट, सर्ट र कमिज आरामदायी हुन सक्छ । यस्तो कपडा भिजेको छ भने पनि छिटो सुक्छ । होलीमा ग्राफिक टिसर्ट पुरुषहरूको लागि सबैभन्दा राम्रो विकल्प हुन सक्छ । यसले तपाईंलाई स्मार्ट र ट्रेन्डी लुक दिन सक्छ ।
पोखराबाट जोमसोमका लागि उडेको तारा एयर सम्पर्कविहीन भएको छ । तारा एयरको ट्वीनअटर विमान ९ बजेर ५५ मिनेटमा उडेको थियो
गणतन्त्र दिवस २०७९ को अवसरमा गणतन्त्र दिवस मूल समारोह समितिद्वारा आइतबार टुँडिखेलमा आयोजित समारोहका । यो पनि…घोडेजात्रा : टुँडिखेलमा जे
स्थानीय तह निर्वाचन सकिएको छ । गत वैशाख ३० गते सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनको मतगणनाको अन्तिम परिणाम लगभग आइसकेको छ
त्यो वैशाख १९ को दिन थियो, मुलुक स्थानीय निर्वाचनको रापतापमा थियो । तपाइको उम्मेदवारी किन ? तपाईको विजयले आममानिसको जीवनशैलीमा
‘हरेक मतको मूल्य तिर्नेगरी मेलम्चीको विकास गर्नेछु’
पोखराबाट जोमसोमका लागि उडेको तारा एयर लेतेमाथि दुर्घटना
स्थानीय तह निर्वाचन : कुन दलका कति आए
‘काठमाडौंमा १० हजार सिसिटिभी क्यामेरा जडान हुनेछ’